Tababar kusaabsan Sharciga Suuq-gaynta Xoolaha DDSI - Cakaara News
Tababar kusaabsan Sharciga Suuq-gaynta Xoolaha DDSI
Jigjiga( cakaaranews )Isniin 28ka March 2016, Tababar uu soo agaasimay Xafiiska Xoolaha iyo Horumarinta Reer-guuraaga DDSI Geedi Socodkiisa Suuqgaynta Xoolaha islamarkaana ujeedadiisu ahayd sii xoojinta iyo sharciyaynta nidaamka suuqgaynta xoolaha iyo sidii looga wada tashan lahaa ladagaalanka ganacsiga xoolaha sharcidarada ah ayaa kadhacay hoolka shirarka ee Xafiiska Beeraha iyo Horumarinta Khayraadka Dabiiciga ah.
Tababarkan ayaa waxaa kasooqayb galay 84 xubnood oo ka kalayimid 20 degmo oo xuduudaha deegaanka kuyaala iyagoo ku baranayay casharo laxidhiidha shuruucda ganacsiga xoolaha iyo waliba sidii loola dagaalami lahaa hal dhinacna looga soo wada jeedsanlahaa.
Hadaba tababarkan ayaa waxaa ugu horayn furitaankiisii kahadlay wasiir kuxigeenka Xafiiska Xoolaha iyo Horumarinta Reermiyiga Mudane Cali Cumar Axmed oo sheegay in tababarkani uu yahay mid lagu baranayo casharo muhiim ah islamarkaana hirgalintiisa faa iido balaadhan u leh deegaanka. Sidookale wuxuu xusay masuulku in kaqayb galayaashu ay sifiican uga faa iidaystaan islamarkaana ay ilaaliyaan saacadaha waxbarashada casharada ay barteen ay ka dhaqan galiyaan goobihii ay ka kala yimaadeen.
Sidookale waxaa isna dhinaciisa kahadlay Gadhwadeenka Geedi Socodka Suuq-gaynta Xoolaha mudane Mustafe Maxamed Xuseen oo sheegay in tababarkan uusan ku koobnayn tababar oo kaliya balse ay garab socoto wada tashi iyo fikir iswaydaarsi. Waxuuna masuulku intaa kudaray in tababarkani uu qayb ka yahay qorshayaasha u yaala geedi socodka ee ku qotoma ladagaalanka ganacsiga xoolaha ee sharci darada ah iyo waliba in dhamaan deegaanka ganacsatada xoolaha ka ganacsata ay fahan buuxa ka qaataan gaar ahaana degmooyinka xuduudaha ku yaaala ay sifiican uga hirgasho ladagaalanka sharcidarada ganacsiga xoolaha.
Ugudanabayna kaqaybgalayaashii tabaabrkan ayaa iyaguna xusay in ay aad ugu faraxsanyihiin islamarkaana ay qaadanayaan casharo muhiima oo ku aadan shuruucda suuqgaynta xoolaha iyo waliba sidii loola dagaalami lahaa sharcidarada ganacsiga xoolaha waxayna tilmaameen dhinacooda inay hirgalinayaan ladagaalanka sharcidarada ganacsiga xoolaha.